Fanomezana Noely: Fitaovana | Vaovao IPhone
Nanomboka tamin'ny Actualidad iPad andiany iray izahay lahatsoratra natokana hanome anao hevitra fanomezana ho an'ny mpankafy Apple rehetra amin'ny Krismasy ho avy. Lahatsoratra sasantsasany izay hiresahantsika momba ny kojakoja, ny rindranasa, ny fonony sns ... izay mifandraika amin'ny iPad, ny iDevice par excellence. Ary ny tontolon'ny Apple dia mahaliana ihany koa mahita ireo 'extra' azontsika ampiana amin'ny fitaovantsika, misy ny sasany tena mahaliana.
Hifantoka amin'ny andiany iray izahay kojakoja izay hahombiazanao. Tsy azoko antoka fa ilay olona sendra ny iray amin'ireto fanomezana ireto amin'ity Krismasy ity, rehefa avy namaha azy ireo tamin'ny famakiana ilay taratasy famonosana izy dia hanao tarehin-javatra iray, satria liana te hahafantatra izy ireo. Miaraka amin'ny a GPS ivelany ho an'ny iPad Wifi (izay efa noresahintsika tamin'ny dika taloha), a fakan-tsary hifehezana ny kelikely, lehibe latabatra mifangaro ho an'ny fetin'ny Krismasy, na efa jiro Philips mahazatra.
1 Bad Elf Dongle, manampy GPS amin'ny iPad Wifi
2 Miaraka amin'ny Smart Baby Monitor, mifehy ny zanatsika amin'ny iDevice
3 Pioneer Digital DJ WeGo2, lasa mpanjaka ao amin'ny antoko
4 Philips Hue Connected Bulb, iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra
Bad Elf Dongle, manampy GPS amin'ny iPad Wifi
Raha manana a iPad amin'ny kinova Wifi (tsy misy fifandraisana an-tariby) Mety ho tsikaritrareo fa tsy manana puce GPS ilay fitaovana, izany dia satria tsy manana puce-n'ny finday ary navelan'i Apple tsy hanana fifandraisana GPS ihany koa isika. Ny olana dia ny iPad Wifi, na dia tsy manana tamba-jotra finday aza dia mety hahaliana azy ampiasao ho fitaovana GPS, ary amin'ny tsy fananantsika an'ity puce ity dia hahavery ity asa ity isika.
Voavaha amin'ny fitaovana natolotrao ity Bad Elf, famerenana ny GPS Dongle teo aloha ho an'ny fitaovana misy mpampitohy 30-pin. Ankehitriny dia manana ny Dongle Fifandraisana varatra ary miaraka aminy ianao dia afaka mahazo toerana GPS sy GLONASS (Rafitra fametrahana Rosiana).
Ny vidiny, manodidina ny € 95. Fitaovana somary lafo nefa mahaliana ho an'izay afaka mampiasa fitaovana GPS lehibe (tendrombohitra, havoana, fitetezana rivotra).
Miaraka amin'ny Smart Baby Monitor, mifehy ny zanatsika amin'ny iDevice
Betsaka ny zavatra nolazaina momba an'ity fakantsary ity hifehezana ny ankizy kely ao an-trano, fakan-tsary 'fanaraha-maso' premium ho an'ny kalitaony, ary ho an'ny sarany ... Ny tena izy dia fakantsary mahafinaritra, mamela ny fihodinana lavitra sy ny fitongilana hahafahanao mifehy ny fihetsiky ny kelinao, Izany dia mamela hazavao amin'ny loko miloko ny efitrano mba hahafahan'ny zanakao kely miala sasatra am-pitoniana kokoa, afaka 'miresaka' aminy mivantana ianao, miaraka a Kalitao 3mpx (loko feno) ary fahitana amin'ny alina.
La mifandray amin'ny Wifi ny fakantsary ary ny zavatra tsara indrindra dia tsy mila miaraka amin'ny tambajotra iray ianao. Ny app WithBaby dia hampandre antsika ny zava-drehetra mitranga amin'ny zanatsika kely fa tsy mila mijery azy isika.
Ny vidiny, 249,95 € fampiasam-bola somary lafo izay mety azonao atao amin'ny tsena faharoa.
Pioneer Digital DJ WeGo2, lasa mpanjaka ao amin'ny antoko
Ny iPad dia fitaovana tsara ampiasaina amin'ny mozika, ary raha mieritreritra Krismasy isika dia hieritreritra an'ireo antoko rehetra izay lamaody amin'izao fotoana izao koa. Angamba ianao hahita ny tenanao amin'ny asa sarotra mandrindra fety amin'ny Taom-baovao, ohatra, ary io fitaovana io no ho famonjena anao hilalao ireo fitsanganan'ny antoko rehetra ireo.
Ny birao fampifangaroana Ny Pioneer's WeGo2 dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra, mifanaraka amin'ny VirtualDJ, Algoriddim djay, Serato DJ ary Traktor Pro 2. Se mifandray amin'ny alàlan'ny tselatra, dia tena intuitivemanana fototra ho an'ny fitaovantsika (mifanaraka amin'ny iDevices rehetra), ary manana andiana LED izay manamarika ny BPM izay hianarantsika mampifangaro hira.
Ny zavatra ratsy dia ny vidiny, 349,95 €, ary lafo ve izany tsara izany ...
Philips Hue Connected Bulb, iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra
Vokatra amin'ny ho avy, zavatra izay mety hiparitaka be ao anatin'ny 20 taona? takamoa maranitra, izay azontsika fehezina amin'ny iDevice. Hanana fifehezana ny tanjaka sy ny tanjaka isika, fa ny tena mahaliana dia ireo fiasa fanampiny azontsika atao miaraka amin'izy ireo ...
Aseho ao anaty a 'Pack Starter'ho an'izay te-hanomboka amin'izy ireo, nanomboka mila ivon-toerana hifehy azy ireo isika. Izy ireo dia takamoa izay miasa amin'ny alàlan'ny wifi amin'ny alàlan'ny switchboard izay horesahintsika izay misy Wi-Fi sy Ethernet fifandraisana. Amin'ity rafitra ity dia afaka mampifandray takamoa 50 Philips Hue isika izay afaka mividy tsirairay amin'ny € 60.
Ao amin'ny horonan-tsary izay anananao etsy ambany dia afaka mahita ny iray amin'ireo fiasa azonao omena an'ireny takamoa ireny ianao. Ary azonao atao izany fandaharana izy ireo hiasa mifanaraka amin'ny mozikao, mamorona tontolon'ny jiro mankany mifohaza na matory, mamorona Recipe IFTTT mba hazava izy ireo rehefa manana fampandrenesana ara-tsosialy vaovao ianao ... Na izany aza, isa tsy tambo isaina ho an'ny fitaovana fanampiny azonao atao miaraka amin'ireo jiro ireo
Ny Starter Pack izay misy ny switchboard ary takamoa 3 dia vidin'ny € 199,95, vokatra lafo nefa tena mahaliana, tiako io!
Fanazavana fanampiny - Manampia GPS amin'ny WiFi WiFi anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fanomezana ho an'ny Noely: Fitaovana
MEGA nandefa ny fampiharana ofisialy ho an'ny iPhone
In1, tranga misy fitaovana maro ho an'ny iPhone